सञ्जिताको बेष्ट फ्रेन्ड निखिल उप्रेती - Everest Dainik - News from Nepal
सञ्जिताको बेष्ट फ्रेन्ड निखिल उप्रेती
लामो समयदेखि चलचित्रमा आबद्ध अभिनेत्री हुन् सञ्जिता लुइँटेल । दर्जनौं चलचित्रकी यी अभिनेत्री गत साता प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘लीला’ मा समेत महत्वपूर्ण भूमिकामा प्रस्तुत भएकी छिन् । मंसिरमा प्रदर्शन हुने ‘गुनगुन’ उनको आगामी चलचित्र हो । अभिनेता निखिल उप्रेतीकी जीवनसंगिनी सञ्चितासँग उनको ग्याङका बारेमा गरिएको कुराकानी स्
ग्याङ बनाउने कुरामा कत्तिको अग्रसर हुनुहुन्छ ?
ग्याङ अर्थात् साथीहरूको समूह बनाउन हरेक व्यक्ति अग्रसर हुन्छन् । यद्यपि म भने यो प्रसंगमा अलि कमजोर छु ।
स्कुल–कलेज पढ्दा म साथीहरूको समूहमा आबद्ध थिएँ । अहिले पनि फुर्सद भएका बेला हामी भेटघाट गर्छौं । मेरा नजिकका साथीहरू चलचित्र क्षेत्रमा छैनन् । कोही बैंकर छन्, कोही चिकित्सकका रूपमा कार्यरत छन् । केही साथीचाहिं विदेशमा छन् । कलेजकी साथी मुना सबैभन्दा नजिककी साथी हुन् । अष्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने सुनिल पनि हाम्रो ग्याङको सदस्य हो । अमेरिका बस्ने बिञ्जु पनि हाम्रै ग्याङकी सदस्य हुन् ।
ग्याङका सदस्यहरूको भेटघाट कस्तो हुन्छ ?
हाम्रो पुरानो ग्याङका सबै सदस्य एकसाथ भेट हुन निकै गाह्रो छ । कलेज पढ्दादेखिकै चार–पाँच जना साथीको समूह छ । खासगरी हामी चाडपर्वका अवसरमा अथवा कसैको घरमा कुनै विशेष समारोह भएका बेला भेट्छौं ।
सबैभन्दा पुरानो ग्याङको सम्झना छ ?
स्कूलमै छँदा मैले रेश्मा अनि सन्तोषसँग ग्याङ बनाएकी थिएँ । सानो असमझदारीले गर्दा हामी करिब दुई वर्ष बोल्दै बोलेनौं । दुई वर्षपछि म उक्त विद्यालय छाडेर अर्कै विद्यालयमा भर्ना भएँ । केही वर्षअघि मेरो दोस्रो डेलिभरीका बेला उनीहरू मलाई भेट्न अस्पतालमै आएका रहेछन् । मैले कुनै प्रशंसक होलान् भनेर सामान्य कुराकानी मात्र गरें । उनीहरू गएको केही समयपछि पो मेरो पुरानो ग्याङका साथीहरू हुन् भन्ने थाहा भयो । उनीहरूले आपसमा विवाह गरेछन् । अहिले फेसबुकमा उनीहरूसँग कुराकानी हुन्छ ।
चलचित्र क्षेत्रका व्यक्तिसँग ग्याङ बनेन ?
चलचित्र क्षेत्रमा म निकै कम व्यक्तिसँग मात्र घनिष्ठ छु । जुन चलचित्रमा आबद्ध हुन्छ, छायांकन अवधिभर उक्त चलचित्रको सम्पूर्ण सहकर्मीसँग सुमधुर सम्बन्ध हुन्छ । अर्को चलचित्रमा सक्रिय भएपछि पुनस् नयाँ युनिटसँग नजिक हुन्छु ।
चलचित्र क्षेत्रको सबैभन्दा नजिकको व्यक्ति ?
पहिलो व्यक्ति त श्रीमान् निखिल उप्रेती नै हुनुहुन्छ । उहाँ मेरो श्रीमान् मात्र होइन, बेस्ट फ्रेन्ड पनि हो । जीवन लुइँटेल पनि मेरो नजिकका साथी हुनुहुन्छ । साप्ताहिकबाट
ट्याग्स: nikhil upreti, Sanjita Luitel